UKubuntu sele esebenzisa uElisa njengomdlali osisiseko somculo | Ubunlog
I-Kubuntu yemihla ngemihla Yakha sele isebenzisa u-Elisa njengomdlali osilelayo, kwaye ibandakanya i icon entsha yomqalisi wesicelo
IPablinux | | Kubuntu, Ubuntu
Ekupheleni kukaDisemba, uLuntu lweKDE phambili izicwangciso zakho zokutshintsha isidlali somculo / ilayibrari yemidiya Kubuntu. Okwangoku, uKubuntu 19.10 u-Eoan Ermine usebenzisa iCantata, ethi, ukuba ndikhumbula ngokuchanekileyo, ithathe indawo yeAmaroK, isidlali somculo esifanelekileyo, ngokwembono yam, sibhidekile. Okwangoku, yingcambu yabanye abalimi abanjengoClementine, apho yaphuma khona kamva Ndingathanda ipere yezinto zokukhafula kwiishethi. Isiqendu samva kulo mdaniso womdlali weendaba siza kudlala ngo-Epreli.
Kutshanje Kubuntu 20.04 LTS Focal Fossa yemihla ngemihla Yakha Sele bebandakanya uElisa njengomdlali womculo ongagqibekanga. IiDaily Builds ziinguqulelo ezipapashwa yiCanonical okanye enye yeencasa zayo ezisemthethweni yonke imihla kwaye kuzo sinokubona lonke utshintsho abasebenza kulo. Ke ngoko, okoko nje kungekho ntlekele yenzekayo, ibiya kuhlala iqinisekisiwe ukuba uElisa uza kuthatha indawo kaCantata, umdlali ojongeka emhle kakhulu, kodwa enamanqaku athile okuphucula, njengonxibelelwano lomsebenzisi (olu luluvo lomhleli).
UKubuntu wazisa ilogo entsha kwimenyu yeapp
Olunye utshintsho olunomdla endilufumeneyo xa ndizamile uKubuntu 20.04 ngokuchanekileyo ukubona ukuba uElisa wayesele efakelwe ngokungagqibekanga yile imenyu yesicelo icon. Kwi-Eoan Ermine sinezinto ezimbini onokukhetha kuzo, ngokuxhomekeke kumxholo esiwukhethayo: ngokungagqibekanga, ilogo iyilogo ye KDE, eyiK ngaphezulu kwecogwheel, kodwa ilogo yePlasma ikwavela kwimixholo efana neBreeze. Kwi-Focal Fossa, i icon iya kutshintsha kule nkqubo yokusebenza, ukuba nje ayenzi lunye utshintsho kwixesha elizayo. I-logo kaKubuntu yile uyibonayo kwisikrini, ngesangqa esigcwalisiweyo ngasemva kunye ne-cogwheel, kodwa yahlulwe kathathu ngaphandle kweK.
Ukuba ufuna ukuzama olu kunye nolunye utshintsho, unokukhuphela uKubuntu wemihla ngemihla yokwakha kwi esi sixhobo. Eyona ndlela yokwenza oku ikwiibhokisi ze-GNOME, kuba isebenza ngokukuko ukuqhuba iiSeshini eziBukhoma ngaphandle kokufaka isoftware eyongezelelweyo, enje Ukongezwa kweendwendwe ukusuka kwi-VirtualBox.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Kubuntu » I-Kubuntu yemihla ngemihla Yakha sele isebenzisa u-Elisa njengomdlali osilelayo, kwaye ibandakanya i icon entsha yomqalisi wesicelo
Ukuphoxeka okuncinci: Ubuntu 20.04 Focal Fossa izakusebenzisa iLinux 5.4
I-Chrome 80 sele ikhutshiwe kwaye olu lutshintsho kunye neendaba